भाग्यमानी छोरो – Part 30 - अलैंचीबारी 1 - Naughty Nepali
Home » Incest Sex Story » भाग्यमानी छोरो – Part 30 – अलैंचीबारी 1
भाग्यमानी छोरो – Part 30 – अलैंचीबारी 1
भर्खरै विकेशसँग खाजा खाएर निस्केको हुनाले मैले खाजा खान्न भनें । साढे तिन बज्दै थियो, हजुरआमाले बहिनीलाई काखीमा च्यापेर आईपुग्नुभयो, त्यही मौकामा सानीआमाले मलाई जिस्क्याउँदै भन्नुभयो “अनि महेन्द्र ! तैले त आफ्नो जायजेथा राम्रोसँग हेर्दा पनि हेरिनस् त ? फेरी आउने कहिले हो कहिले ? आएको बेलामा सबै राम्ररी हेरेर जाँदा हुन्छ नि ? दिदी देखाउनुहुन्न छोरोलाई सम्पत्ति ?” “लौ हिँड त जाँउ ! छ बजेसम्म त हेरेर सकिहालिन्छ नि ?” त्यसपछी आमा र म आफ्नो जग्गा-जमिन हेर्न भनेर लाग्यौं, अलिकति त आगाडी पनि हेरेका थियौं । सानीआमाको करेसापट्टीबाट अघि लाग्ने क्रममा मैले आमालाई च्याप्प समातें अनि किस गर्न थालें, आमाले प्रतिरोध गर्दै भन्नुभयो “छोड् जाँठा ! ठाँउ न कुठाँउ समाउछ… कसैले देख्यो भने फसाद हुन्छ ?” मैले आमाको पोकालाई जोडले समाउँदै भनें “तपाईंलाई विश्वास लाग्दैन आफ्नो छोरामाथी !” अनि आमाको टि-शर्ट माथी सारेर ब्राको हुक खोलेर बाहिर निकालें त्यसपछी आमाको लुङ्गीलाई माथी सारेर पेन्टी पनि खोलिदिएँ र आमाको ब्रा र पेन्टीलाई आफ्नो पेन्टको गोजीमा राख्दै भनें “हजुर त मेरो आमा मात्रै हो र ! गर्लफ्रेण्ड पनि त हो नि ! अब हिँडदाखेर चाक मट्काउँदै पोका हल्लाउँदै हिँड्नुस् न ?” आमा अगाडी अगाडी चाक हल्लाउँदै हिँड्नुभयो, पोका हल्लियो कि हल्लिएन मैले देखिन तर निश्चयनै हल्लिएको हुनुपर्छ ।
आमा अगाडी अगाडी चाक हल्लाउँदै हिँड्नुभयो, पोका हल्लियो कि हल्लिएन मैले देखिन तर निश्चयनै हल्लिएको हुनुपर्छ । म आमाको पछाडी पछाडी लाँडो सन्काउँदै हिँडदै रहें । निकै पर उत्तिसको रुखहरु भएको ठाँउ देखाउँदै आमाले भन्नुभयो “उ त्यो उत्तिसको जङ्गल देखिस् त्यहाँ हाम्रो अदुवा खेती छ र त्यही नेर अलैंची पनि रोपेको छ, बारीको डिलजति सबै अम्रिसो लगाको छ ?” म आमाको शरिरमा पछाडीबाट टाँसिएर दुवै हातलाई आमाको छातिमा बेरेर पोका समाएर हल्कासँग मसल्दै भनें “त्यही गएर हेरुँ न आमा !” यसपटक आमाले मेरो हात समाएर डोहोर्*याउँदै लिएर जानुभयो । आमाले अघि देखाएको ठाउँमा पुगेर रोकिदैं मैले फेरी आमालाई च्याप्प समाएर टि-शर्टभित्र हात छिराएर आमाको कोमल र नरम पोका खेलाउन सुरु गरें, आमाले सहमतिमुलक प्रतिरोध गर्नुभयो, मैले आमाको पोकामा मसल्दै घुण्डीलाई दुई औंलाको चेपमा राखेर घुमाउँदै भनें “मेरो सम्पत्ति त हजुर हो नि ? हजुर भएपछी मलाई केहिपनि चाहिँदैन ?” “बुहारी पाएपछी थोत्रो भनेर फर्केर नि हेर्दैन होलास् अहिले नाटक गर्छ ?”
मैले आमाको लुङ्गीको गाँठो खोलिदिदै भनें “त्यो त तपाईको भ्रम मात्र हो आमा ! तर एउटा कुरा मान्नुभयो भने चाँही तपाईंलाई म सधैं पियारी बनाएर चिकिरहनेछु ! र मेरो कुरा मान्नुभयो भने सायद: बुबाले पनि तपाईंलाई फेरी धित मर्नेगरि चिकिरहनु हुनेछ ?” “के कुरा भन् न ?” मैले आमाको तिघ्रामा हातले समाएर खुट्टालाई मेरो कमरमा बेर्दै हातले आमाको पुठ्ठामा च्याप्प समाएँ अनि भनें “तपाईंलाई बुबाको गर्लफ्रेण्डको बारेमा थाहा छ ?” “के भन्छ यो ? तेरो बाउलाई दिनभरी पसलमा बस्न र साँझ परेपछी रौसी खान बाहेक के नै आउँछ र ?” “यहींनेर त तपाईं चुक्नुभयो नि ? एउटा कुरा भन्नु त मलाई ?” “के कुरा हो भन् न त ?” “बुबा र तपाईं राती सुत्दा बुबाले केहि कुरा नौलो गर्न खोज्नुभएन ?” “छ्या तेरो बाउले जहिले पनि चाकमा चिक्नलाई जिद्धी गरेर बस्थें । चाकमा पनि कहिं चिक्छन् त ?” “ल भन्नु त चाकमा चिक्न दिदाँ तपाईंको के जान्छ ? दुनियाले चिकाउँछन् त चाकमा !” “ओंठ निचोरे दुध आउँछ कुरो चाँही दुनियाको गर्छ ! कसले चिकायो चाकमा लौ भन् त ?” “ह्या आमा पनि ! बुबाको गर्लफ्रेण्ड होस् या उसकी बहिनी, सानीआमा होस् या विकेशको आमा सबैले चाकमा चिकाउँछन् अझ अरुको के कुरा गर्नु रुबीनाले त झन् एकैपटक दुईटा प्वालमा चिकाउने रहर गर्छे !” “के नचाहिने कुरा गर्छ यो ? चिनेजति सबैको नाम लिएर जे पायो त्यही बोल्छ, कहिले चिकाई तेरो सानीआमाले चाकमा ? अनि रुबीनाको कुरा कसरी गर्न सकेको होला ? कि भ्याईस् रुबीनालाई पनि ?”
chikeko katha, chikeko katha nepali, chikeko nepali katha, chikeko nepali story, chiyabari ma chikeko, erotic story nepali, inscest sex story, inscest story, iscest nepali sex story, lado chusi, lado puti ma, lado puti ma chikeko story, naango boobs, naya sex katha, nepali chikeko, nepali chikeko katha, nepali chikeko story, nepali erotic story, nepali inscest story, nepali katha sex ko, nepali puti, nepali puti chikeko, nepali sex katha, nepali sex story, Pallo Ghar Ko Neha Le Lado Chusi, puti chikeko, real nepali sex katha, Stories chak chikeko katha, अलैंचीबारी
भाग्यमानी छोरो – Part 29 – सन्ध्या